Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. सात दिन भित्र तपाइँले सोचेको काम बन्नेछ। ॐ लेखि सेयर गरौं – Janata Live
काठमाडौं– सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ।त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस7दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!! अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ घ जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐॐॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ !
यो पनि पढ्नुस : परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलिङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन रु किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिंगलाई पुजा गर्छन् । सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्रमबाट बच्नुहोस्ः लिंगको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ ।
शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ । पुरुष लिंगको अर्थ पुरुषको प्रतीक भन्ने हुन्छ । यसैगरी स्त्रीलिंगको अर्थ स्त्रीको प्रतीक भन्ने हुन्छ । र नपुसंक लिंगको अर्थ नपुसंकको प्रतीक भन्ने हुन्छ । आखिर के हो त शिवलिंग रु शुन्य, आकाश, अनन्त, ब्रह्माण्ड र निराकार परमपुरुष भएकाले यसलाई लिंग भनिएको हो ।
वास्तवममा यस्तो ब्याख्या दिगभ्रमित गर्नका लागि अंग्रेजहरुले गरेका हुन् । हामीलाई नै थाहा छ, एउटा शब्दलाई भिन्न—भिन्न भाषामा अलग—अलग अर्थ निकाल्न सकिन्छ । त्यसैले शिवलिंगको अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, ब्यवहार वा प्रतीक हो । धर्ती यसको पिठ्यु र आधार हो । त्यसैले अनन्त शुन्यबाट पैदा हुन्छ, त्यसैमा लय हुनाका कारण यसलाई लिंग तथा अन्य विभिन्न नामबाट समेत सम्बोधन गरिएको हो ।जस्तोः प्रकाश स्तम्भरलिंग, अग्नी स्तम्भरलिंग, उर्जा स्तम्भरलिंग आदि । ब्रह्माण्डमा दुई चीज छन् उर्जा र पदार्थ । हाम्रो शरीर पदार्थबाट निर्मित हुन्छ भने आत्मा उर्जा हो ।
यसै प्रकारले शिव पदार्थ र शक्ति उर्जाको प्रतीक बनेर शिवलिंगका रुपमा चिनिन्छ । ब्रह्माण्डमा उपस्थित सबै ठोस तथा उर्जा शिवलिंगमा निहित हुन्छ । वास्तवममा शिवलिंग हाम्रो ब्रह्माण्डको आकृति हो । किन शिब लिंग को पूजा गरीन्छ रु शिव शंभु आदि र अंत का देवता हुन वहाको न कुनै स्वरूप हुन्छ न आकार वहा निराकार हुनुहुन्छ । आदि, अंत नभएको कारण लिंग लाइ शिव का निराकार रूप मानीएको हो तेसैले शिवको साकार रूप मानी भगवान शंकर मानेर शिब लिंग रूप को पूजा गरीयको हो ।
यसकारण श्री शिवमहापुराण सृष्टिखंड अनुसार सृष्टि को पालनकर्ता विष्णु ले एक पटक, सृष्टि को रचयिता ब्रह्मा को साथ निर्गुण-निराकार(अजन्मा ब्रह्म९शिव० को प्रार्थना गर्नु भयो ‘भोलेनाथ हजुर कसोगरी प्रशन्न हुनुहुन्छ’ प्रभु शिव ले भन्नुभयो, ‘यदि मलाइ प्रसन्न गर्ने हो भने शिवलिंग का पूजा गर्नु । जब जब कुनै प्रकार को संकट या दुस्ख हुन्छ शिवलिंगमा पूजा गर्नाले समस्त दुस्ख को नाश हुन्छ । जब देवर्षि नारद ले श्री विष्णु लाइ श्राप दिय र पछि पश्चाताप गर्नु भयो तब श्री विष्णु ले नारदजी लाइ पश्चाताप को लागी शिवलिंग को पूजा, शिवभक्तको सत्कार, नित्य शिवशत नाम को जप गर्न बताउनु भयो ।
मनोकामना पुर्ण गराउने व्रत र नियम ! धार्मिकशास्त्र अनुसार एकादशी व्रत सबैभन्दा महत्वपुर्ण र शुभ फलदायी व्रत मानिन्छ । शुक्ल र कृष्ण पक्ष तिथि गरी महिनामा दुई पटक एकादशीको व्रत हुने गर्दछ । दुबै व्रतको फल समान हुन्छ ।३ यस व्रतको दिन शुद्ध जलीय आहार मात्र ग्रहण गर्नु पर्दछ ।
एजेन्सी– विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाका कारण विश्व त्रसिद छ । दैनिक जनजीवनका काममा मानिसहरु निस्किन सकिरहेका छैनन् ।
सामाजिक संस्कारमा पनि कोरोनाको प्रभाव परेको छ । कोरोनाको कहरकै बीच अमेरिकामा एक जोडीले गरेको विवाह अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।
सोमबारको दिन देवताको पनि देवता आरध्यदेवष् महादेवको पूजा गरिन्छ । अविवाहित नारीले सुयोग्य बर पाउन तथा पतिको दीर्घायूको कामनासहित विवाहिता नारीले भगवान शिवको पूजा आरधना गर्ने गर्दछन् ।यो दिन सेतो रंगको कपडा लगाउने र सेतै रंगको वस्तुहरुको दान गरेमा विशेष फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ ।
अन्य समाचार, सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न शक्ति पीठमध्येको एक बडिकेदारको जात्रा ९मेला० आज रातिदेखि शुरु हुँदैछ । बडिकेदारको दर्शन गरेमा मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास छ ।
थारू समुदाय र भारतको उत्तर प्रदेशका विभिन्न ठाउँबाट बडिकेदार आउने दर्शनार्थीको बिहीबारदेखि नै घुइँचो लागेको बडिकेदारका भराडी हर्कबहादुर बोहराले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दर्शनार्थी दुई/तीन दिनदेखि आउने क्रम शुरु भएको छ, बर्सेनि हजारौँ तीर्थालुको यहाँ भीड लाग्छ ।” यहाँबाट अपी र सैैपाल हिमाल देख्न सकिन्छ ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक अभाव‘।कर्मचारी समायोजनको सकस चलिरहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक अभाव देखिएको छ ।
यहाँ स्वास्थ्य सहायकले उपचार भइरहेको स्थानीयवासी हेम बलमे बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चिकित्सकको माग गरेको ग–यै छौँ, सुनवाई भएको छैन ।” जोरायल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि लामो समयदेखि चिकित्सकको अभाव छ । यहाँ स्वास्थ्य सहायकका भरमा बिरामीको उपचार भइरहेको छ ।
भारतमा संक्रमण बढदै गएपछि सरकारले कोरोना भाइरस (कोविड–१९) को संक्रमण रोक्नको बन्दाबन्दी (लकडाउन) लाई आगामी मे महिनाको ३ तारिखसम्म लम्ब्याएको घोषणा गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत महिना घोषणा गर्नु भएको २१ दिने लकडाउनको अवधि समाप्त हुँदै गरेको अवस्था पुनः १९ दिनको लकडाउनलाई जोडिएको घोषणा गरेका थिए । –एएनआई
अन्शु आइसोलेशनमा बसेको वैशाख ९ गते २५ दिन भयो । धेरैजसो समय उनको ममी ९आमा, जो बेल्जियममै हुनुहुन्छ०सँग कुरा गरेर बित्छ । हरेक पटक आमाले ठिक हुन्छ भन्दै उत्साह भर्ने गरेको उनी बताउँछिन् । बाँकी समय साथीहरुसँग कुराकानी गर्ने, यूट्यूवमा फिल्म हेर्ने अनि पढाइमा बिताउने गरेकी छिन् ।
अन्शु बेल्जियम आमाबुवालाई भेट्न गएकी थिइन् गत मंसिर ९डिसेम्बर०मा । कक्षा ११ को परीक्षा नजिकिँदै थियो । अतः परीक्षाकै लागि भनेर उनी हतार हतार फर्केको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘बेल्जियम गएपछि पनि केही समय त बाहिरतिर डुलेँ, तर पछि भने घरै बसेँ । कसरी संक्रमण भयो भन्ने नै थाहा नहुने रहेछ ।’
काठमाडौं उपत्यकाभित्र कति कोरोना संक्रमितको कहाँ–कहाँ हुँदैछ उपचार ? (सूचीसहित)
काठमाडौं, ६ असार । नेपालमा शनिबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका ३३१ जनामध्ये आठ जना काठमाडौं उपत्यकाका रहेका छन् ।
स्वस्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा। डा। जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौंकी एक महिला र भक्तपुरका ७ जना महिलामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए । पछिल्लो केहि दिनयता दिनहुँ काठमाडौं उपत्यकामा पनि कोरोना संक्रमित थपिन थालेका छन् ।
लकडाउन खुकुलो र बाहिरी जिल्लाबाट मानिस भित्रिने क्रम बढेसँगै काठमाडौं उपत्यकामा पनि दिनहुँ संक्रमित थपिन थालेका छन् । शुक्रबार काठमाडौं उपत्यकामा तीन जना संक्रमित भेटिएका थिए । यस्तै बिहीबार ६ जना संक्रमित भेटिएका थिए ।
काठमाडौं उपत्यकामा ३० संक्रमितको उपचार हुँदै
काठमाडौं उपत्यकामा थपिएका आठ कोरोना संक्रमित बाहेक यसअघि भेटिएका ३० जनाको उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
ललितपुर लगनखेलस्थित पाटन अस्पतालको आइसोलेसनमा १८ महिला र सात पुरुष गरेर २५ जनाको उपचार भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा। समिरकुमार अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा तीन पुरुष र सशस्त्र प्रहरीको अस्पतलामा दुई पुरुषको उपचार भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् । जेठ १२ गतेदेखि असार ५ गतेसम्म कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाको पाटन, शिक्षण र प्रहरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
उनीहरु धेरैको स्थायी ठेगाना उपत्यका बाहिर भएपनि केही काठमाडौंमा बस्दै आएका, केही उपचारको लागि काठमाडौं आएका र केही विदेशबाट फर्किएका छन् ।
पाटन अस्पतालमा भक्तपुर चाँगुनारायणमा बस्दै आएका ३२ र भक्तपुरकै भोलाछेंनमा बस्ने २२ वर्षीय पुरुष, काठमाडौंकी एक २४ वर्षीया महिला । काठमाडौंकै कोटेश्वर बस्ने ३४, गौशालामा बस्दै आएकी २७, कोलोपुल बस्ने ४८ वर्षीया महिलाको उपचार भइराखेको छ।
त्यसैगरी नयाँ बानेश्वरका ५२ वर्षीय पुरुष, काठमाडौं मुलपानीकी ३६, काठमाडौं खुसीबुमा बस्दै आएकी ६४ र ललितपुर हरिसिद्धिकी ४० वर्षकी महिला उपचारत छन् ।
यस्तै सर्लाही घर भई काठमाडौं बस्दै आएकी ३१ वर्षीया महिला, सर्लाहीका ५७ वर्षीय पुरुष, रामेछाप लिखु तामाकोशीका २६ वर्षीय पुरुष, धादिङ निलकण्ठका ३२ वर्षीय पुरुष, धादिङकै ३५ वर्षीया महिला, चितवन रत्ननगरका ४९ वर्षीय पुरुष, चितवनकै २७ वर्षकी महिला, सिन्धुलीकी २३ वर्षकी महिला, मकवानपुरका ३७ र ३८ वर्षीया महिला, सिन्धुपाल्चोककी २२, २४ र ३२ वर्षीया महिला, मोरङकी र उदयपुरकी ३२ वर्षीया दुई महिलाको उपचार भइरहेको छ ।
शिक्षण अस्पतालमा तीन जना
शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा भारत बस्दै आएका कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ का ५१ वर्षीय पुरुष र अर्घाखाँचीको सितगंगा वडा नम्बर ३ का २८ वर्षीय पुरुष र धनगढीका ४४ वर्षीय पुरुषको उपचार भइरहेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालमा दुई बिरामी
काठमाडौं बूढानीलकण्ठका ४५ वर्षीय पुरुष र सोलुखुम्बु घर भई काठमाडौं गोठाटार बस्दै आएका ३० वर्षीय पुरुषको सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
उनीहरु सबै जना जेठ १२ देखि शुक्रबार (असार ५ गते) सम्म अस्पताल भर्ना भएका हुन् । नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या २२ पुगेको छ भने आइसोलेसनमा ६ हजार आठ सय ५० जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ ।